Kuongororwa kwe cinema inoenderana nepfungwa: mafirimu epfungwa | Ndipei zororo
Paco Maria Garcia | | Zvinonakidza
Pfungwa dzemunhu, kunyangwe zvese zvakanyorwa uye kuongororwa, ichiri nzvimbo isingazivikanwe. "Musoro wega wega inyika," chinodaro chirevo chakakurumbira, icho chinobvumidza munhu wega wega kududzira chokwadi nenzira dzakasiyana.
Iyo bhaisikopo haina kupunyuka ichi chisingaperi kusavapo kwekusahadzika. Naizvozvo, iro runyorwa rwemazita anogona kuzivikanwa se mafirimu epfungwa rakakura. Uye zvirizvo, uyezve, munzira dzakawanda kupfuura imwe.
1 Ndeapi maficha epfungwa mafirimu?
2 Iwo maFace maviri eChokwadi, naGregory Hoblit (1996)
3 Bug, naWilliam Friedkin (2006)
4 Iyo Yechitanhatu Sense, naM. Night Shyamalan (1999)
5 Isingaputsike, naM. Night Shyamalan (2000)
6 Zvakawanda, naM. Night Shyamalan (2017)
7 Masaya, naSteven Spielberg (1976)
8 Psycho, naAlfred Hitchcock (1960)
9 Runyararo rweMakwayana, naJonathan Demme (1991)
10 Izvo zvisingakundike Kuda Kuvhima, naGus Van Sant (1997)
11 Zvese zvekurota, naGus Van Sant (1995)
12 Kubva, naChristopher Nolan (2012)
13 Mukati Kunze, naPeter Docte (2015)
14 Imwe Yakabhururuka Pamusoro peNesti raCuckoo, naMilos Foreman (1975)
Ndeapi maficha epfungwa mafirimu?
Izvo zvinofungidzirwa kuti mune chero fikisheni firimu (kana chii chakafanana, yese cinema isiriyo zvinyorwa), mumwe nemumwe ane "psychology" yake. Kana munhu akatanga kubva pachirevo chakakura ichi, kuyedza kudzikisira hunhu hwemafirimu epfungwa hakuna zvakunobatsira.
Kuti udzivise zvakajairika, zvinogona kutaurwa kuti mhando iyi ye cinema ine chimwe chete chezvinhu zvinotevera:
1) Ivo protagonists vane zvimwe zviri pachena kusagadzikana kwepfungwa, ane basa rekugadzira firimu "kufamba."
2) Vagadziri vemafirimunemaune vanotamba nepfungwa dzevaoni. Zvese zviri mukutsvaga kuti ubudise mamwe mhedzisiro, kunzwa uye manzwiro mukati mevateereri.
3) Iyo zano inotsvaga kutsanangura, kana kumbobvunza, munzira Pfungwa dzevanhu dzinoshanda sei.
Zviso zviviri zvechokwadiNaGregory Hoblit (1996)
Gweta rine mukurumbira, rine hunhu hwakakura sekuremekedzwa kwake, rinotora nyaya yeacolyte achipomerwa mhosva yekuponda archbishop. Sezvo kutongwa kuri kuenderera mberi, gweta rinowedzera kuwedzera kubatirana nemutengi wake, mukomana anofumura netiweki yekushungurudzwa pabonde mukati mekudyira kwechechi. Kunyange zvakadaro, Vateereri uye protagonist iye haazokwanise kuwana hwaro hwese kusvika pekupedzisira chiitiko.
uta, naWilliam Friedkin (2006)
William Friedkin, director anozivikanwa we Iye Exorcist, inopinda mupfungwa yemhare muhondo na Delirium yeParasitosis. Iyo yakasvibira uye ine hukasha staging. Kuita kunokatyamadza kwaMichael Shannon semurwi akapenga uye Ashley Judd semumwe wake waakakanganisa, tora izvozvo vatariri vanonzwa zvipembenene zvinofamba mukati meganda rako.
Sense yechitanhatuna M. Night Shyamalan (1999)
Ko vakafa vanoziva here kuti havasi vapenyu? Chirevo chakazara icho, mukati mepfungwa dzemunhu ari pane "imwe ndege", chinova chakaomarara. Kurapa kunoitwa nemwana wepfungwa, uko murwere akaongororwa anopedzisira ave murapi anosunungura.
Isingachinjikina M. Night Shyamalan (2000)
Vaviri ve Sense yechitanhatu: M. Husiku Shyamalan-director naBruce Willis-mutambi, vakadzokororwa mumutambo uyu, kupi inoongorora mukati me psychology yemagamba makuru uye villains. Dambudziko iro rinogumira pane dzidziso dzeYin Yang kana chiedza uye rima.
Akawandana M. Night Shyamalan (2017)
Shyamalan wechitatu zita pane iro runyorwa nemafungiro epfungwa. James McAvoy anotamba Kevin Wendell, murume anotambura ne dissociative chitupa chirwere. Dennis, mumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vano "gara" mukati mepfungwa dze protagonist, anotapa vechidiki vatatu, izvo zvinomutsa kukakavara.
Iyi firimu, kunyangwe hazvo iri rinozivikanwa bhokisi bhokisi uye yakakosha kubudirira, yakakonzera kupokana kwakawanda. Nyanzvi dzezvepfungwa, varapi vepfungwa uye vanhu vanoonekwa vaine zvimwe zvirwere zvepfungwa, vakabvunza mufananidzo wengozi nemhirizhonga inopfuudzwa nemunhu wepakati.
SharknaSteven Spielberg (1976)
Izwi remafirimu epfungwa risati rasvika, Steven Spielberg "akanyora" netepi iyi, iyo manifesto yakavhurwa maitiro ekutyisidzira vateereri pasina kuratidza chero chinhu. Iyo monster haina kuoneka kusvika pakati nepakati peiyo vhidhiyo, izvo zvisina kudzivirira vateereri kuramba vakanamatira kuzvigaro zvavo. Kutya kwepfungwa mune kwayo yakachena fomu.
PsychosisNaAlfred Hitchcock (1960)
Makore gumi nematanhatu Spielberg isati yasvika, Alfred Hitchcock anga atogadzira yake yega dzidziso nezve kutya kwevanhu. Norman Bates, mumwe wevanonyanya kuratidza huipi munhoroondo yemamuvhi, anotamba nezvakawanda kupfuura kungofunga pfungwa dzeaakabatwa.
Kunyarara kwemakwayananaJonathan Demme (1991)
Clarice Starling (Jodie Foster), mudiki weFBI mumiriri, anofanira kutsvaga rutsigiro rwaHanibal Lecter (Anthony Hopkins) kuti abate mhondi ine njodzi. Pakati pezviviri ichatanga hondo yesimbi inotyisa, umo hapana kana mumwe wavo ari kuda kurega muvengi wavo apinde.
Izvo zvisingamiswe Kuda Kuvhima, naGus Van Sant (1997)
Wechidiki shasha ine nhamo yakapfuura, uyo anosarudza kudzivirira hukama hwehukama na kutya kukuvadzwa. Mushure mekuzeza kuenda kuchirapa, anopinda mahara-kune vese nachiremba wake wepfungwa. Asi zvishoma nezvishoma bhatiri rake re nzira dzekudzivirira anopa uye anokwanisa kuvhura pfungwa dzake.
Zvese zvekurota, naGus Van Sant (1995)
Asati atungamira Izvo zvisingamiswe Kuda Kuvhima, Van Sant akange apinda mumutambo unovhunza hunhu hwekuwana iyo kubudirira chero zvodii. Ino nyeredzi isingaregi Nicole Kidman, paakatanga kutyora musikana akanaka muforoma uko Hollywood yakamuchengeta yake pigeonholed.
KutanganaChristopher Nolan (2012)
Christopher Nolan chaizvo anopinda mukati mepfungwa dzevanhu kuburikidza nehope. Nechiitiko chake chetsika chinooneka chakachena uye chakajeka, anogadzira nyaya inosimbisa nzvimbo yaanokurukura izvo chaizvo nezvisiri izvo.
ReversenaPeter Docte (2015)
Izvo hazviwanzo kujairika kuwana komedhi mune runyorwa rwepfungwa mafirimu. Uye kana iri firimu yehupenyu, ndoda. Asi ino Pstrong firimu iri graphic exemplification yekushanda kwemanzwiro emunhu. Inopembererwa nevatsoropodzi neruzhinji, kunyanya nevana vepfungwa uye varapi.
Mumwe munhu akabhururuka pamusoro pedendere rerunganonaMilos Foreman (1975)
Iyi firimu inogona kuverengerwa seiyo "Girafu dzvene" remafirimu epfungwa. Ichowo chimwe chemafirimu matatu akakunda maOscar mashanu epamusoro. (Firimu, director, mutambi, mutambi uye script).
Iyi yakasarudzika yakakura munhoroondo yemamuvhi yakavakirwa pakutsoropodzwa kwehutsinye kweiyo American hutano hutano system kubva kuma70. Zvakare kutarisa kusinga gutsikane mapfupi anotora pfungwa dzemunhu kuvanza kubva pachokwadi.
Mifananidzo yezvinyorwa: Baúl del Castillo / YouTube
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » Cine » Zvinonakidza » Mafirimu epfungwa
Mazita eVakadzikadzi veDisney
Dzimwe nzira dzeSpotify